“Hadihadian’ny Mpampanoa lalàna” ireo Fikambanana Tsy Miankina Any amin’ny Faritanin’ny Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Avrily 2013 7:38 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Français, Swahili, English
Ireo mafana fo an'ny DemVybor any amin'ny faritr'i Voronezh dia nitatitra tao amin'ny blaogin'ny DemVybor [ru] fa manao fanadihadiana any amin'ireo Fikambanana tsy miankina (ONG) ny biraon'ny mpampanoa lalàna any an-toerana. Ireo fikambanana efatra nokendrena dia samy ao anatin'ny Tranoben'ny Zon'Olombelona ao Voronezh [ru] avokoa: izany dia ny Hetsiky ny Tanora ho an'ny Zon'olombelona, ny Vondrona Iraisam-paritra ho an'ny Zon'olombelona, ny Fikambanana ECOSOCIS, ary ny Ivotoerana ho an'ny Fampivoarana ny Tetikasam-bahoaka. Article20.org [ru], tambajotram-baovao momba ny zon'olombelona dia namoaka [ru] PDF ny sarin'ny fitakian'ny mpampanoa lalàna fanampim-baovao avy amin'ny ECOSOCIS. Izany dia mivaky toa izao:
Ny Biraom-paritry ny mpampanoa lalàna, araka ny fangatahan'ny Lehiben'ny Mpampanoa lalàna ao amin'ny Federasiona Rosiana, dia manatanteraka fanadihadiana mba hanarahana ny lalàna momba ny fikambanana tsy miankina, ary hanoherana ny “extrémisme”.
Lohan'ny taratasin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna any Voronezh . Sary, 7 Aprily 2013.
Ny karazana fanazavàna takiana dia mikasika indrindra ireo antontan-taratasy ara-bola sy fitantanana, ka tafiditra amin'izany mazava ho azy ny vola voarain'ny fikambanana avy any ivelany. Hita fa mikendry indrindra ny fangaraharàn'ny famatsiam-bola avy any ivelany izany lalàna vaovao izany. Ny sasany anefa milaza fa mikendry ny fampiatoana ny famatsiam-bola avy any ivelany ho an'ireo fikambanana rosiana tsy miankina mihitsy izany.
Ny tena mahaliana dia mangataka fanazavàna manokana ny mpampanoa lalàna momba ny hetsiky ny vondrona amin'ny vahoaka, fanontaniana mahazatra izay toa mikendry ny ampahan'ny lalàna manohitra ny “extrémisme”, nefa koa toa baiko hanaovana fitsaràna ny famokarana avy amin'ny tahirim-bola:
15) fanazavàna momba ireo hetsi-bahoaka (famoriam-bahoaka, fihetsiketsehana, diabe, fitokonana, fivoriana) karakaraina sy tontosain'ny fikambanana, ary koa ireo hetsi-bahoaka nandraisan'ny fikambanana anjara. Manomeza famintinana fohy ny momba ireo hetsi-bahoaka, ny tanjon'izany, ary ireo vokatry ny fanatontosàna azy.
Mety hoe te-hanery ireo Fikambanana tsy miankina fotsiny ny biraon'ny mpampanoa lalàna Voronezh mba hanamarinan'izy ireo fa tena mandeha amin'ny làlana sy ny tanjona napetrany tokoa izy ireo! Azo eritreretina hoe rehefa avy nandefa ireo antontan-taratasy rehetra ireo ny fikambanana dia ho hitany mazavazava kokoa ny fandehan'ny famokarany. Mazava ho azy, raha tsy avy dia nakatona izy.